मोदीका पुरस्कारको लिलामी किन गरिँदै छ ? – Khabar Silo
नयाँ दिल्ली : भारतीय प्रधान्मन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पछिल्लो एक वर्षमा पुरस्कारस्वरूप प्राप्त भएका उपहार लिलामीमा राखिएको छ। पुरस्कारको लिलामी गंगा सरसफाइ अभियानका लागि आर्थिक जोहो गर्न गरिएको हो। केन्द्रीय संस्कृतिमन्त्री प्रह्लाद सिंह पटेलले गंगा नदी सरसफाइ योजनाको लागि अर्थ जुटाउन राखिएको लिलामीको उद्घाटन शनिबार गरेका छन्।
लिलामीमा राखिएका सामग्री । तस्बिर : मोदीको ट्विटरबाट ।लिलामी राष्ट्रिय आधुनिक कला संग्रहालयमा राखिएको छ। लिलामीमा सल, पगडी र अन्य २७ सयभन्दा धेरै सामग्री छन्। लिलामी कार्यक्रम सेप्टेम्बर १४ शनिबारदेखि अक्टोबर ३ सम्म हुनेछ।उनले भने, ‘प्रदर्शन गरेर राखिएका स्मृति चिह्न हरेक हप्ता फेरिनेछ। स्मृति चिह्नमा चित्र, मूर्ति, सल, पगडी, ज्याकेट र पारम्परिक बाध्यबादनका सामग्रीहरु रहेका छन्।’
पटेलका अनुसार स्मृति चिह्नको सबैभन्दा कम मूल्य भारू २ सय र धेरै मूल्य अढाइ लाखसम्म तोकिएको छ। मोदीले यो प्रयासको लागि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा भाग लिन आग्रह पनि गरेका छन्।उनले ‘ई लिलामी’ वेभसाइडको लिंक ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘जे भइरहेको छ त्यसमा सधैँ मेरो विश्वास छ। पछिल्लो एक वर्ष मलाई जति पनि उपहार तथा स्मृतिचिह्न प्राप्त भएका छन् ती सबै उपहार लिलामी गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
के अझै ट्रम्पले बाजी मार्न सक्लान ? यस्तो छ बाँकी राज्यको अवस्था
काठमाडौं-अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावको मतगणना जारी रहँदा दुई उम्मेदवारबीच अझै उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । अहिलेसम्म डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेन ट्रम्प भन्दा अगाडि छन् । उनलाई बहुमत पुग्न मात्र ६ इलेक्टोरल भोटको खाँचो छ । उनले हालसम्म २६४ इलेक्टोरल भोट पाएका छन् भने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २१४ इलेक्टोरल भोटकासाथ पछ्याइरहेका छन् । मतगणना जारी […]
यी हुन् अफगानिस्तान छाड्ने बेलामा मारिएका अमेरिकी सेना, अधिकांश २० बर्षको हाराहारीका
काबुलको विमानस्थलबाहिर भएको आत्मघाती बम हमलामा अमेरिकन र अफगानीहरुको उद्दारकार्यमा खटिएका १३ जना अमेरिकी सेनाको ज्यान गयो । अमेरिका छाड्ने डेडलाइन अगस्त ३१ भन्दा केहीदिन अगाडिमात्र उनीहरु मारिएका हुन् । माक्स्टन सोभियक ज्यान गुमाउने अमेरिकी सेनाका सदस्य ओहायोको बर्लिन हाइटका २२ बर्षका माक्स्टन सोभियकले सन् २०१७ मा मिलानको एडिसन हाइस्कुलबाट ग्रयाजुएट गरेका थिए । उनी […]